Ra’yi: Md Farmaajow tiiraan’yooyinkii tacsiyadeed ee joogtada ahaa ma laba marxuum oo kaliyaa kuugu maqaalaa? | Ilwareed Online
Home WARKA DALKA Ra’yi: Md Farmaajow tiiraan’yooyinkii tacsiyadeed ee joogtada ahaa ma laba marxuum oo...
Ra’yi: Md Farmaajow tiiraan’yooyinkii tacsiyadeed ee joogtada ahaa ma laba marxuum oo kaliyaa kuugu maqaalaa?
Qormadaydan ayaa ah mid tala wadaaag iyo tusmayn kusaabsan tacsiyiyooyinka joogtada ah ee dalkeena kadhaca in Madaxweyne Farmaajo uu si cadaaladeed uga tiiraanyoodo ugana tacsiyeeyo maadaama uu yahay Madaxweyna dalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaaa badanaa tan iyo markii ladoortay 8dii Febraayo ee sanadkan musiibooyinkii tacsiyadeed ee kadhacayay Muqdisho ayaanan marna kamaqal canbaarayn iyo Allaha unaxariisto inta dhimatay.
*8dii Jun ayaa waxaa shacab barakacaayl caruur ay dhaleen oo gaaraysa 130 ay udhinteen gaajo,cudurka jadeecada iyo hooy la’aan magaalada Muqdisho,wax tacsiya ah kama maqal Md Farmaajo iyadoo maalmo kahor uu tacsiyeeyay ciidamo ku dhintay gobollada dalka gobal kamid ah taasoo iyana ay muhiim ahayd in uu kahadlo kana tacsiyeeyo .
*9kii bisha jun waxaa hoobiya yaal ku dhacay xaafad kamid ah Degmada Wadajir halkasoo ay ku nafwaayeen qoys ka koobnaa 4 oo ay kujirtay hooyadii dhashay AU taasoo ahayd musiibo aad uxanuun badan,marna ma’arag Madaxweynaha oo tacsidaa AU qooyskaa dhibku gaaray dhahayo.
*9kii Agoosto Madaxweyna ayaa iiga soo muuqday Tvga Qaranka isagoo katacsiyeeynaya laba marxuum allaha unaxariistee oo mudan in uu utacsiyeeyo taasoo iyana uusan raacin labadii bilood ee lasoo dhaafay dadkii kudhintay Muqdisho oo isugu jiray Saraakiil,Mas’uuliyiin iyo shacab in iyana uraaciyo Allaha unaxariisto.
Maqaalkaygan tusmada ah ee kujira diiwaankayga kaydka uguna magac daray “Madaxweyne Farmaajo Musiibooyinka Muqdisho kadhaca ma maqalkeedaa kugu yar mise tiiraanyada Muqdisho kadhacdaa talo wadaag kahaysan ?’
Dulacda qormadayda: –
8dii febraayo2017dii ayay ahayd doorashadii Madaxweyne Farmaajo iyadoo dal iyo dibad looga banaanbaxay dareen farxadeedna laga wada muujiyiyay dunida dacalladeeda haba ugu darnaatee Magaalada Muqdisho.
Waxaan jeclaystay in aad ila wadaagtaan su’aalahaa !
*Madaxweyne Farmaajo Muqdisho tiiraanyada kadhacda in aan kawayno maxaan kaaga mudannay?
*Madaxweyne Farmaajo ma’awoodi waaayay inta dhimatay allaha unaxariisto tacsiyiyooyinka joogtada ah ee Muqdisho kadhaca?
*Madaxweyne Farmaajo farxaddii Muqdisho doorashadaadii laguu sameeyay musiibadii kadanbaysay Marxuumiinti mudnaa weey naga wada baxeen maxaan kaaga weeynay?
“Lasoco qaybta labaad ee maqaaladdayda murugeed ee sooyaalka maanta diiwankayga keeyda kujirta,
(Md Farmaajow tiiraan’yooyinkii tacsiyadeed ee joogtada ahaa ma laba marxuum oo kaliyaa kuugu maqaalaa?)
Previous articleFarmaajo “Cudurka Dabaysha waa laga cirib tiray dalka”
Next articleMadaxweyne Gaas oo magacaabay wakiilka Puntland ee Finland
Contact us: ilwa[email protected]